Ngamafuphi nje, imikhaya elincane endaweni yokuhlala esingaphansi 18 square metres, kuhlanganise yokugezela ngokuhlanganyela kanye nekamelo lokugezela, ikhishi ahlukene yokugezela. Nokho, zonke lezi amakamelo kancane ehlukile mancane kakhulu. Ukuze umndeni kwabathathu uzobe ukulingana kahle, ikakhulukazi ekuqaleni, uze ugcine up for efulethini evulekile. Kulungele omakhelwane, etholakala ngqo emva kodonga futhi a amamitha ambalwa kusukela wangaphambili, ngoba wonke amafulethi zitholakala ephasishi efanayo. Kufanele kuqashelwe ukuthi lena Malosemeika enhle, empeleni kukhona izinketho nakakhulu ukuphi.
Abantu abaningi abahlala emadolobheni futhi bazi abazi ukuthi kukhona lokhu ukuthi hlobo luni lwezindlu, kokubili imikhaya ezincane, lokhu akukhona evamile eyikamelo elilodwa efulethini nokuningi ongakhetha kukho engabizi. Kufanele kuqale iziphakamiso embi kakhulu.
Ihostela lapho amakamelo yangasese amancane wabelane elineshawa, ekhishini. Lena omkhulu efulethini ngokuhlanganyela. Ayikho ubumfihlo, konke okwenzekayo ngemva kodonga ungezwa lonke. Akukho ithuba ukuya ethoyilethi noma eshaweni uma ufuna. ukuxabana njalo nabantu abahlala kula ekhishini izikhukhula kanye nobunye ubunzima. Ukuntuleka kokukhulumisana ohlanganyelwe kuyinto ukungakwazi ukuthenga izindlu ezinjalo, noma ukuthola impahla. Kumele baqonde, lezi zokuhlala basonta inkampani eyodwa, lapho konke ezizimele futhi is owned by nomnikazi oyedwa kuphela.
Amafulethi ngabanye ezisukela 12 kuya 45 square metres, eyenzelwe amakamelo amabili noma ngisho ezintathu, kodwa yayincane. Lona khetho ukonga kakhulu. Noma yimuphi ithuba ukuthenga indlu ubhekwa kuphumelele ngempela, kuhlanganise nemikhaya encane. Kuyini lokhu? Hhayi mansion, kodwa namanje nophahla phezu kwekhanda lami, ngalo ungakwazi ukuphila ngokugcwele. ephasishi Hlukanisa eside, eyenzelwe 8-12 zokuhlala, njengomgijimi ophelele indlela Malosemeika.
Ifanele imindeni amancane?
Izivakashi, abafundi, imindeni abasha - konke lokhu akuxhomekile lwabantu abadinga izindlu unomphela. Laba bantu bayazi nokuthi yini imindeni amancane, lokhu akukona ahlukene ephezulu grade efulethini, kodwa namanje indlela ezingabizi kakhulu ukuthenga isikhala esincane eziphilayo. Ngo kude izindawo isikhungo zingatholakala izindlela eyamukelekayo ngempela ukuthenga amafulethi yalolu hlobo. Intando eshibhe Yiqiniso, ehostela okungukuthi okuphelele kubafundi. Ukuze uthole abasha umndeni efulethini imikhaya encane fit best nge yokugezela zabo, kanye nekamelo lokugezela. Izivakashi ungathola eziningi lasebenzisa izikhangiso zamaphephandaba noma uxhumane agency ingcebo lapho lezo ziphakamiso kakhulu.
ingcebo Zanamuhla - Malosemeika, ehostela nezinye izinhlobo zezindlu - uye washintsha abalulekile. Izinkampani eziningi yokwakha izindlu lishe laba ngumlotha nge zokuhlala ezindaweni elincane okufushane umnotho. Ngakho, ungakwazi ukuthenga izindlu ngempela ehloniphekile ngamanani akhokhelekayo. Kuze kube manje, imindeni amancane - kuyini? Cishe a yesimanje studio efulethini nokuba khona amafasitela European, ukulungisa, indlu yangasese yangasese kanye yangasese. Zonke-ke mayelana lula nenduduzo uthi ukuze uhlale, ngisho noma hhayi ezindlini okunethezeka.
Eziyinkimbinkimbi zokuhlala "St George" (Volgograd) - indlu enomlando omude
Inkampani "LesDomstroy": ukubuyekezwa. "LesDomstroy": Ikheli Office, umbono abakhi
Kungani sidinga ipasipoti cadastral ngesikhathi efulethini ukwenza
Indlela eziphucuzekile uqhuba izindlu nezindawo ukuthengiselana.
Indlela ushintshe iphasiwedi yakho ku Mile kahle
Indlela ukupheka chops: amathiphu
Usawoti ezifakwa entanyeni: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa kanye nemiphumela
Indlela fuck ekhaya